တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားရသည့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများထံ တရုတ်နိုင်ငံက အကူအညီများ ပေးပို့ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Cagayan de Oro မြို့၌ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရိုင် (Rai) တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား ကမ်းခြေစောင့်တပ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက ကယ်ဆယ်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-- Philippine Coast Guard/Handout via Xinhua)
မနီလာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဖိလစ်ပိုင်အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းဒေသအချို့ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရိုင်(Rai) ကြောင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားရသူများအား ကူညီရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရသည် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရိုင်(Rai) ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၇၅ ဦးအထိ တိုးလာခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ၅၆ ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရှိ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသများသို့ တရုတ် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Huang Xilian က ပြောကြားခဲ့သည်။
“တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရိုင်ကြောင့် သေဆုံးဒဏ်ရာရမှုတွေအပြင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မိသားစုတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ” ဟု Huang က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအနဖြေင့် မနီလာမြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးက ပီဆို ၈ သန်းခန့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀,၃၉၄) တန်ဖိုးရှိ သော အစားအသောက်အထုပ်ပိုးပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း Huang က ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ထုပ်လျှင် ဆန် ၅ ကီလို၊ စည်သွတ်ဗူး ၁၀ ထုပ် နှင့် ခေါက်ဆွဲ ၁၀ ထုပ် ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဒေသခံ ဖိလစ်ပိုင်-တရုတ် အသိုက်အဝန်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဟာ Cebu မြို့ ၊ Leyte မြို့ ၊ Negros Occidentalပြည်နယ်၊ Boholပြည်နယ်၊ Cagayan de Oro မြို့ Surigao မြို့တွေကို ရောက်ရှိလာပါပြီ” ဟု Huang က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်အစိုးရမှ လှူဒါန်းသော ဆန် ကီလိုဂရမ် ၄.၇၂၅ သန်းသည် ဖိလစ်ပိုင် ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးတွင် ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း Huang က ဆိုသည်။ ဆန် ကီလိုဂရမ် ၁.၅ သန်းသည် ယခု အခါ Cebu ပြည်နယ် တွင်ရှိပြီး ကီလိုဂရမ် ၃.၂၂၅ သန်းသည် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများသို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက် မနီလာတွင်ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
သဘာဝဘေးဒဏ်သင့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများထံ ဆန်အမြန်ဝေငှပေးခဲ့သော ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ အထူးသဖြင့် လူမှုဖူလုံရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း Huang က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့ အတူ ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးကူညီသွားမှာပါ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူများအားလုံး အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားပြီး သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကို စောစောစီးစီး ပြန်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်” ဟု Huang က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘေးမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် တရုတ်အစိုးရက ကူညီရန် အသင့်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Xu Wei က ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် အသက် သေဆုံးခဲ့ရသူများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အလွန် ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း Xu က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ရိုင်သည် ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းရှိ Mindanao ကျွန်းရှိ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှ Siargao ကျွန်းသို့ ပထမဆုံး ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းမုန်တိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို သုံးရက်ကြာ တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ရေကြီးမှု မြေပြိုမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရိုင်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး လူဇုန်ကျွန်းရှိအဓိကျသော အချို့နေရာများ အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းဒေသတို့တွင် အပျက်အစီးများ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
“China will do its utmost to continue its firm support to the disaster relief efforts of the Philippine government and the Filipino people. We wish all those affected could overcome the difficulties and rebuild their homes at an early date,” Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian said.
MANILA, Dec. 22 (Xinhua) — The Chinese government on Tuesday started distributing relief supplies to help thousands of victims of Typhoon Rai that battered the central and parts of the southern Philippine regions last week.
Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian said that Chinese relief goods are on the way to typhoon-affected areas in the central and southern Philippines.
“Our hearts go out to all the Filipino families who were devastated by Typhoon Rai, which has caused massive casualties as well as property loss,” Huang said inastatement.
In an urgent response, Huang said the Chinese Embassy in Manila has raised 20,000 food packages worth around 8 million pesos (160,394 U.S. dollars). Each package contains5kilos of rice, 10 canned food, and 10 noodles packs.
“With the help of the local Filipino-Chinese community, these relief goods are on their way to Cebu, Leyte, Negros Occidental, Bohol, Cagayan de Oro City, Surigao City, (and) Negros Oriental,” Huang said.
Huang said 4.725 million kilos of Chinese government-donated rice are already in different Philippine ports. He said 1.5 million kilograms are in Cebu now, while the 3.225 million kilograms are in Manila for transport to the typhoon-affected areas.
“China will do its utmost to continue its firm support to the disaster relief efforts of the Philippine government and the Filipino people. We wish all those affected could overcome the difficulties and rebuild their homes at an early date,” Huang added.
On Monday, Xu Wei, spokesperson for China International Development Cooperation Agency, said that the Chinese government is ready to help the Philippines in its efforts to recover from the deadly typhoon.
Xu said that China has expressed its deep condolences to the victims.
On Thursday afternoon, Typhoon Rai first slammed into Siargao Island, off the eastern coast on Mindanao island in the southern Philippines. It lashed the Philippines for three days, causing flooding and landslides.
Rai exited the Philippines on Saturday, leavingatrail of destruction in the central and southern Philippines region, including some areas in the main Luzon island.■
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ အသုံးပြုနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ